Archive du 15/02/2012
Lasa i Giovanna Nandraingiraingy izay nolalovany
Lasa namela takaitra i Giovanna, ilay rivodoza voasokajy ho mahery vaika vao namakivaky an�i Madagasikara farany teo.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Hanova zavatra maro
Nifanandrify indrindra tamin�ny fanokafana tamin�ny fomba ofisialy ny fivoriana tsy ara-potoana fahatelon�ny Parlemanta no nidiran�ny rivodoza Giovanna teto Madagasikara, omaly talata 14 febroary.
Manjakatompo Nanaovana bemidina indray
Nisy nanao bemidina indray tao amin�ny tan�nan�i Tojo Ravalomanana ao Manjakatompo-Andranomanelatra ny alatsinainy 13 febroary 2012 tokony ho tamin�ny telo ora tolakandro.
Mety hosamborina indray
Ankoatra ny rivotra mafy dia mafy nentin�ny rivodoza Giovanna ka namela takaitra mafy eto amin�ny firenena iray manonotolo dia mbola rivotra hafa mampisafotofoto ny sain�ny mpanara-baovao politika maro ihany koa ny raharaha Razanakoto Marcellin, mpikambana ao amin�ny Kongresin�ny tetezamita nosamborina sy notazonina vonjimaika teny amin�ny tobin�ny zandary teny Andoharanofotsy nandritra ny hateloana tamin�iny herinandro lasa iny.
Mandany volam-bahoaka ny fivoriana eny Tsimbazaza
Mahamenatra fa tena kilalao sy andranandrana no atao eto amin�ity firenena ity ankehitriny, hoy i Zafilahy Stanilas tetsy amin�ny Magro Behoririka ny alatsinainy teo
Arahabaina ry Jean tsy maty fo aman�aina tamin�iny rivodoza be iny.
Hiampy herinandro ny andro tsy hianarana
Aorian�ny 22 febroary vao ho fantatra na hiverina na tsia ny fampianarana eny amin�ny anjerimanontolo.
Fanampiana sy fanarenana ny simba Any Vatomandry ny Croix Rouge, nanome helikoptera ny tetikasa Ambatovy
Samy miezaka amin'ny asa famonjena sy fanampiana ireo olona traboina sy tra-pahasahiranana amin'ny faritra maro manerana ny Nosy ireo sampandraharaha ara-panjakana sy tsy miankina isan-karazany.
Nafotaka ny fitadiavana ireo kojakoja ilaina amin�ny fiainana andavanandro sy sakafo omaly teny an-tsena.
Fiarovana amin�ny Loza voajanahary
Tsy ampy ny serasera amin�ny vahoaka
Tsy ampy amin�ny ankapobeny ny serasera amin�ny vahoaka ao anatin�ny fiatrehana ny loza voajanahary tahaka ny rivo-doza Giovanna nandalo an�i Madagasikara omaly.
Mikatona mandritra ny herinandro
Maro ireo tsy nanampo ny hikatonan�ny fitsarana raha tonga teny ka nanan-draharaha tamin�ny alatsinainy teo.
Nampiteny ny moana
Tamin�ny 1, 2, 8 maraina no nanomboka tapaka ny ankamaroan�ny jiro teto an-drenivohitra sy Antsirabe ka hatrany Itasy any omaly.
Misy fanodinkodinam-bola ?
Nanomboka ny zoma lasa teo ary dia mbola nitohy omaly talata ny fanadihadiana atao amin�ireo mpiasa mikasika ny fitarain�izy ireo fa misy fanodikodinam-bola ao.
Mifangarika ny fotodrafitrasa
Malaza dia malaza ankehitriny ny fananganana hopitaly vaovao manara-penitra eto amintsika. Ireo mikatona noho ny tsy fisian�ny mpitsabo sy tsy fahampian�ny fanafody ary noho ny tsy fisian�ny fikarakarana ny toerana misy anefa etsy an-kilan�izay dia miseho lany ihany koa.
Tena rivodoza tokoa no nandalo teto amintsika omaly, ary horaketina ao amin'ny tantaran'i Madagasikara ny datin'ny 14 febroary 2012, tokony ho andron'ny mpifankatia, kanefa dia lasa andro manjombona ho an'ny firenena noho ny fahapotehana sy ny fahasimbana, teo ihany koa ireo aina nafoy.